Diblomaasi Mareykan ah oo dhaliilay Farmaajo, "Farmajo wuxuu Somalia u horseeday 4 sano oo Guul Darro ah" - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Diblomaasi Mareykan ah oo dhaliilay Farmaajo, “Farmajo wuxuu Somalia u horseeday...
Diblomaasi Mareykan ah oo dhaliilay Farmaajo, “Farmajo wuxuu Somalia u horseeday 4 sano oo Guul Darro ah”
Afarta sano ee xukunka uu hayey madaxweyne Farmaajo wuxuu ku fashilmay in uu Soomaaliya u horseedo midnimo kana saaro xasilooni daradda, sidda uu sheegay diblumaasi Ameerikaan ah.
Stephen Schwartz, safiirkii Mareykanka ee Soomaaliya [2016-17] oo faalo ku daabacay Foreign Policy Research Institute, ayaa xusay in Farmaajo uu maamuladda kula macaamilay siyaasad xifaaltan ah.
“Fursad kasta wuxuu uga faa’iideystay in uu isku-dayo in uu ku wiiqo ama ku maamulo ayaga [dowlad goboleedyadda],” ayuu qoray.
Wadashaqeyn la’aantaas ay mas’uulka ka tahay dowladda Farmaajo ayaa sababtay in uu gaabis ku yimaado waajibaadyo hor-tabin u lahaa qaranka sidda sugida amniga, qabashada doorasho qof iyo cod ah iyo horumarka.
Danjiraha ayaa ku eedeeyay Farmaajo in uu mas’uul ka ahaa mooshinkii deg-deg ahaa ee Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka ka diyaariyey ra’iisul wasaarihii saddexda sano iyo barka wada shaqeynayeen.
Xasna Cali Khayre ayaa kalkii dambe wuxuu shaaciyey in uu isagu is-casilay isla markaana uu “u tanaasulayo danta waddanka iyo dadka”.
Siyaasadda arrimaha dibadda ayuu tibaaxay in dowladda Farmaajo ay diiradda saartay danaha shaqsiga ah. Madaxweynaha iyo taliyaha NISA ayuu qeexay in ay malaayiin doolar ka heleen dowladda Carbeed ee Qadar.
“Lacagtaas ayay ku huriyaan siyaasad musuqmaasuq ah. [Sidoo kale], waddanka ayay u nug-liyeen khilaafka dalalka Khaliijka,” ayuu tilmaamay. “Kenya ayay xiriirka u jareen, ayaga oo ciidamo u daabulay gobolka Gedo si ay u cadaadiyaan Jubaland. Wadahadalka ayay ka doorbideen in ay xadka xasarad ka abuuraan taas oo wiiqdey la dagaalanka maleyshiyadda Al-Shabaab.
Mar uu soo hadal-qaadey doorashooyinka 2020-21 ayuu carabka ku dhuftay is-mari-waaga ka taagan saddexda qodob ee kala ah; ciidanka Gedo, qadiyadda xulista wakiilada Somaliland iyo guddiyada la isku hayo.
Maamulka xilka la wareegaya 20-ka Janaayo ee Joe Biden ayuu cod dheer ugu baaqay in uu diiradda saaro arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo in uu xaqiijiyo sidii ay u noqon lahayd mid isla ogol-yahay.
“Safiirka Mareykanka waa in uu awood-siiyaan una qareemaa geedi-u-socod doorasho oo la isla ogol-yahay laguna kalsoonaan karo,” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay Stephen Schwartz oo lagu bedelay Donald Yamamota.